၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဖက်ဒရယ်အိမ်မက် – Federal Journal
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဖက်ဒရယ်အိမ်မက်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၁၉၈၀လောက်ကစပြီး နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်နဲ့ တရားဝင်အခွင့်အရေးရဖို့ “ဌာနေတိုင်းရင်းသား” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အရင်ကထက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာကြပါတယ်။ ဒီအတွက်လဲ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကနေ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ ဖိုရမ်များစွာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာတော့ ကုလသမ္ဂ၏ ဌာနေ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဆိုင်ရာ ကြေငြာစာတမ်း (UNDRIP)ဆိုတာထွက်လာပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိင်ငံတွေမှလည်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို လက်ခံခဲ့ကြပြီး အဲဒီအချိန်တုန်းက လက်မှတ်မထိုးတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနဲ့ ဘူတန် နှစ်နိုင်ငံပဲရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အာရှစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး ပြဌာန်းကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံကတော့ နဲပါသေးတယ်။ လက်ရှိ စာရေးနေတဲ့ အချိန်ထိတော့ ဂျပန်၊ နီပေါ၊ ဖိလိပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့သာ တိတိကျကျ ဥပဒေပြဌာန်း ပြီး ကာကွယ်မှုပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ဆိုတာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးကြေငြာစာတမ်းပါ အချက်တွေကို ဥပဒေပြုပြီး အခြေခံဥပဒေမှာ ထည့်သွင်းခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ “ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ” ဆိုတာကို ၂၄ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅မှာ ပြဌာန်းခဲ့ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားကြေငြာစာတမ်းကို အပြည့်အ၀ ထောက်ပံ့ထား တဲ့ (ဝါ) အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ ဥပေဒေမဟုတ်ပဲ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဟာ ဖက်ဒရာယ်ဆန်ကြောင်း ကာကွယ် လိုတဲ့ အပေါ်ယံဥပဒေသာဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒအကြောင်းပြုပြီး ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဝန်ကြီးတွေရှိနေပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာ ပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမရှိတာ အထင်အရှားပဲဖြစ်တယ်။)
မြန်မာပြည်မှာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့် အဦးဆုံး တက်လှမ်းခဲ့တာ ကတော့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU), ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) နဲ့ နာဂအမျိုးသားများလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု (NPMHR) စတဲ့ အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ဖြစ်တည်မှုကို သတိပြု မိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဖိုရမ်ကို ကိုယ်စားလှယ် များစေလွှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ အဓိက အခြေခံတဲ့ အိုင်ဒီယာကတော့ ၁၉၄၇ခုနှစ်က တောင်တန်းနဲ့ပြည်မ အကြားချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို အလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။
တဖက်ကနေ မြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေ ကနေဘာလို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို တစိုက် မတ်မတ် ပြောဆိုကြရသလဲဆိုတာနဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို အလေးအနက်စွဲကိုင်ကြတာလဲ ဆိုတဲ့ အခင်း အကျင်းကို နားလည်ဖို့ သမိုင်းကိုတချက် ပြန်ကြည့်ကြရရင် ဗြိတိသျှတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ (၁၈၂၅-၁၉၄၈) ကြားကာလတွေမှာ ဗြိတိသျှတွေဟာ ကိုလိုနီခေတ်မှာ လူဦးရေများပြီး အဓိကကျတဲ့ ပြည်မကို ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမယ့် လူဦးရေနဲတဲ့ တောင်တန်းဒေသ တွေကိုတော့ သူ့ရှိရင်းစွဲ အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်စေ ခဲ့တယ်။ ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းမှာလဲ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးအတွင်းမှာ ဝင်ရောက် အမှုထမ်းမှုများစွာ ရှိခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဦးပိုင်းကာလတွေမှာလဲ ကချင်၊ ချင်း၊ ကရင် စတဲ့ သူတွေဟာ ဗြိတိသျှတပ်မတော်မှာ အများဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်တာတွေ့ ရတယ်။ ပြည်မက ဗမာတွေကျတော့ ၎င်းတိုကို အုပ်ချုပ်သူ ဗြိတိသျှတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ သဘာဝကျစွာ ဂျပန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်။ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ဝင်ဗြိတိသျှနဲ့ ဝန်ရိုးစွန်းဂျပန်နိုင်ငံတို့တွေ တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါ ဒေသတွင်းက တိုင်းရင်းသားတွေဟာလဲ ၎င်းတို့ ပါဝင်ရာဖက်ကနေ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး စစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါ မယုံကြည်မှုတွေနဲ့ သံသယတွေဟာ ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ကမ္ဘာစစ်အလွန်မှာ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေအတွက် သီးခြား လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ စဉ်းစားမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ၁၉၄၇ခုနှစ်မှာ ပြည်မရဲ့ စည်းရုံးမှုကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လုံမြို့မှာ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ကယားနဲ့ ပြည်မတို့ပါဝင်တဲ့ ပင်လုံကွန်ဖရင့်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီကွန်ဖရင့်ကနေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူးပြုတဲ့ ပြည်မခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တန်းတူရေးနဲ့ ဖက်ဒရာယ်အခြေခံမူတွေကြောင့် တက်ရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကနေ တိုင်းပြည်တခု အတူတည်ထောင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီသဘော တူညီမှုတွေ အပေါ်မှာအခြေခံပြီး လွတ်လပ်ရေး ရပြီးရင် တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးလဲ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုရေးဆွဲထားရှိထားကြတယ်။ ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီ ၄မှာ လွတ်လပ်ရေး အတူရယူခဲ့ပေမယ့် ပြည်မဖက်က ခေါင်းဆောင်နဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ပြည်မသားတွေကိုယ်စား အာမခံပေးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လွတ်လပ်ရေးမရမှီ ခြောက်လခန့်အလိုက လုပ်ကြံခံရမှုဟာ ရှိရင်းစွဲ ထိရှလွယ်တဲ့ အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခဲ့တယ်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အကြောင်းပြုရေးဆွဲထားတဲ့ ကရင်ပြည်နယ် နမိတ်ကိစ္စ မကျေလည်မှုကို အကြောင်းပြုလို့ ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကနေ သီးခြားလွတ်လပ်ရေး ရယူလိုခဲ့သလို ရှိရင်းစွဲ မွန်နဲ့ ရခိုင်တို့ရဲ့ ပြည်နယ်သတ်မှတ်ပေးရေး ဆန္ဒကနေ လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာ ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ၁၉၆၀ခုနှစ်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ် ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာပြဌာန်းရေးကို တကယ် အကောင်အထည်ဖော်လာတဲ့ အခါမှတော့ တန်းတူရေးကို အခြေခံဖို့ ကတိကဝတ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်လာခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဖက် ကနေ ဘာမှသီးခံနိုင်စရာမရှိတော့တဲ့နောက်ဆုံး ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်ဖို့ပဲ ရှိလာတော့တဲ့အတွက် ဦးနုမှ ဦးနေဝင်းကို တဖက်လှည့်နဲ့ နိုင်ငံတော်အာဏာ သိမ်းခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၆၂ မတ်လ ၂ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းမှ အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ တိုင်းရင်းသားများဆန္ဒဟာ မီးခဲ ပြာဖုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ (ဒီသမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် တွေဟာ ဆောင်းပါးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ထောက်ပံ့မည့် အကြောင်းများကိုသာ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်တဲ့ အပြင် အတိုချုပ်ထားရတဲ့အတွက် မပြည့်စုံမှုများရှိပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူ)
တိုင်းပြည်ဟာ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် စတာတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့အပြီးမှာ အငြင်းပွားမှု တွေနဲ့ပဲ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၀မှာတော့ ဒီမိုကရေစီခေတ်ဦးကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲဟာ ဝိဝါဒကွဲမှုတွေရှိနေခဲ့ပေမယ့် အီပြီး မြောင်းပုပ်တောင်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးရေစီးကို တဖန်ပြန်လည် စီးဆင်း စေနိုင်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီရေစီးနဲ့အတူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှိပ်မှုတွေ အောက်မှာ ရောက်နေတဲ့ ပြည်မနဲ့ တောင်တန်းက လူထုတွေကြားမှာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရာယ်အိမ်မက် ပြန်လည်နိုးထလာ ခဲ့တာလဲ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲနိင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သလို၊ ၂၀၁၅ အနိုင်ရ အဲန်အယ်ဒီအစိုးရ ကနေလဲ ၂၁ရာစုပင်လုံအမည်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေရေးကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀နှစ်တာ ကာလမှာ ဒီအစိုးရနှစ်ရပ်လုံးက တိုင်းရင်းသားများ (တိုင်းပြည်ထောင်ဖက်များ) လိုလားတဲ့ တန်းတူရေးနဲ့ အာဏာခွဲဝေရေးကို ကျေနပ်ရ လောက်အောင် လုပ်ဆော်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သေးတာတော့ သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအကျပ် အတည်းနဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ လူထု၊ အဓိက အားဖြင့် တောင်တန်းသားတွေ အမြင်မှာ သူတို့ရဲ့ ရှိရင်းစွဲအတိတ်က လွတ်လပ်မှုထက်တောင် တဆင့်နိမ့်သေးတဲ့ ဖက်ဒရာယ်စနစ်တောင်းဆိုမှုနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အတူတကွအုပ်ချုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ပင်လုံကတိကဝတ်ကို ယုံကြည်ဆုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့က ဒီအခြေအနေဟာ မှန်ကန်တဲ့ရပ်တည်ချက်ဟုတ်ပါရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမေးလာကြတယ်ဆိုတာ လက်ရှိ ဒီစာရေးနေတဲ့ ဂျွန် ၂၀၂၀ အချိန်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြန်မာပြည်တွင် စစ်ပွဲတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ တဖက်ကလဲ နိင်ငံရေးအကျပ်အတည်း (Political deadlock) ကိုကွင်းရှောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိင် တဲ့ လုပ်ငန်းတွေရှိနေရက်နဲ့ မလုပ်ဆောင်တဲ့ (နိုင်သေးတဲ့) အနိုင်ရပါတီတွေရဲ့ သဘောထားဟာ ဒီ ဖက်ဒရာယ်လွန်ဝါဒ နိုင်ငံရေးအယူအဆကို မီထိုးနေသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို ဖက်ဒရာယ်လွန် အိမ်မက် တိုင်းရင်းသာဘယ်လောက်ကများ မက်နေကြမလဲဆိုတာနဲ့ နောင်မှာ ဒီလို မဖြစ်ရလေအောင် နိုင်ငံရး အကျပ်အတည်းကို ဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲဆိုတဲ့ နိင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ် အကောင်ထည်ဖော်မှသာ “ဖက်ဒရာယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ” တည်ဆောက်တာ လမ်းမလွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ် မိတယ်။
နောက်ပြီး လက်ရှိဆောင်းပါးရေးနေတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက လူမည်းအမျိုးသား ဂျော့ဖလွိုက်ကို ရဲတွေဖမ်းဆီးရင်း သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အကြောင်းပြုပြီး စတင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးအပြင် အာရှ၊ ဥရောပနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွေအထိပါ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါ တယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကတော့ လိုအပ်ရင် စစ်အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမယ် လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကမ္ဘာမှာ ဓနအင်အားနဲ့ စစ်အင်အား နံပတ်တစ်နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သြဇာအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် အနေနဲ့ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို စစ်တပ်သုံးပြီး ဖြိုခွင်းချင်ပေမဲ့ တကယ့် လက်တွေ့မှာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်တာဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ အားကောင်းချက်ကြောင့်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်မမှားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အထက်မှာ တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းမှာ အချက် ၄၆ချက်ပါရှိပြီး သေချာဖတ်ရှုဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေချည်းပဲ ဖြစ်ကြပါတဲ့ပြည်မနဲ့တောင်တန်းသားတွေ အတွက် အကျိုးရှိမယ့်၊ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ရှောင်ကွင်းကာ တိုင်းရင်းသားများလိုလားတဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အဖြေဟာ ဒီ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ကြေငြာစာတမ်းပါ အချက်များပဲ ဖြစ်တယ်လို့ တဲ့တိုးပြောရရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
တက်ခဲ့တဲ့အစိုးရတွေကနေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီမံကိန်းများဟာဆိုရင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ကိုယ့်အိမ်ဝင်းထဲ သူများကနေ အကျိုးအမြတ်လာယူနေတဲ့၊ ပြည်ထောင်စု အတွက်လဲ အကျိုးအမြတ်မရတဲ့ အဖြစ်တွေအများကြီးရှိနေ သလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး သမားတွေကနေ ထောက်ပြနေပေမယ့် ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ စီမံ ကိန်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မြန်မာပြည် တဝှမ်း ဒင်းကြမ်းရှိနေတာပါ။
နောက်တဖန် တိုင်းရင်းသားများ ရဲ့ ထုံးတမ်းဓလေ့နဲ့ လားလားမျှမကိုက်တဲ့၊ ဘာအတွက်ရယ်လို့တိတိကျကျ မရှိပဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ခိုင်မာအားကောင်းခြင်းလဲမရှိတဲ့၊ ဥပဒေတွေ ပြင်ဆင်ဥပဒေတွေ ဖြည့်စွက်ပြဌာန်း ပေမယ့် တတိုင်းပြည်လုံးက လက်မခံတဲ့ မြေယာဥပဒေတွေ ပြဌာန်းခဲ့ခြင်းစတာတွေကလဲ ဖက်ဒရာယ်စနစ် ဖော်ဆောင်ဖို့ သွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံဟာ မှန်နေရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ် စရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ယခုဖော်ပြပါအချက်များအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဆိုင်ရာ အခွင်းအရေးကြေငြာစာတမ်းပါ အပိုဒ် ၂၅မှ၃၂ကိုကြည့်ရှု ချင့်ချိန်ရန်)။
အထွေထွေနိင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေရှိနှင့်ပြီးသား မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၂၀မှာ တတိယအကြိမ်မြောက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပါတော့မယ်။ တချိန်တည်းမှာလဲ ဒီကာလဟာ တကမ္ဘာလုံးကနေ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့ ကိုဗစ် ရောဂါကပ်ဘေးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီကပ်ဘေးဂယက်ကလဲ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနဲ့ စီးပွားရေး နာလံထူရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်ချက်တွေ ဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်တက် မယ့်အစိုးရကနေ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ထားမှု များစွာလုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။
နောက်တဖန် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ဖော်ဆောင်နေဆဲ စီမံကိန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဥပဒေတွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲမလဲ၊ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ ဖြေရှင်းမရနိင်တဲ့ ပုဒ်မတွေကို ဦးတည်ချက်ထား နေမယ့်အစား တခြားအလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့၊ တိုင်းရင်းသားများလိုလားတဲ့ အချက်တွေကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ် မလဲဆိုတာမျိုးကို စဉ်းစားမှသာလျှင် အကျပ်အတည်းနဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိင်မှာဖြစ်တယ်။
အချုပ်ဆိုရရင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဌာနေ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဆိုင်ရာ ကြေငြာစာတမ်းကို ပါဝင်ထောက်ခံ လက်မှတ်ထိုးပြီးသား မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ၎င်းကြေငြာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာပြီး ပေါ်လစီချမှတ်ရာမှာ ၎င်းကြေငြာစာတမ်းပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျပ် အတည်းဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာမှာ ပိုမိုထိရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ လာလတ္တံ့ သောကလာတွေမှာလဲ တိုင်းရင်းသားများ ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရာယ်အိမ်မက်ကို ဆက်လဲကိုင်ဆွဲဖို့နဲ့ ဖက်ဒရာယ်လွန်အိမ်မက်တွေနဲ့ ပိုမိုကြမ်းတမ်းတဲ့ အထွေထွေအကျပ်အတည်းထဲ မသက်ဆင်းလိုဘူး ဆိုခဲ့ရင် အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို မူဝါဒဖော်ဆောင်သူတွေအနေနဲ့ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားကြစေလိုကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါတယ်။
၂၂ ဂျွန် ၂၀၂၀
Peter Swift, ‘Understanding Chin political participation in Myanmar’(MSc. thesis, University of
– Peter Swift, ‘Understanding Chin political participation in Myanmar’(MSc. thesis, University ofWisconsin-Madison, 2018)
– Michael Hathaway, ‘The emergence of indigeneity: Public intellectuals and an Indigenous space in southwest China’.
– Ardeth Thawnghmung, The ‘Other’Karen in Myanmar: Ethnic minorities and the struggle without arms (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2012)
ကမ်ဘာပျေါမှာ ၁၉၈၀လောကျကစပွီး နိုငျငံရေးပနျးတိုငျနဲ့ တရားဝငျအခှငျ့အရေးရဖို့ “ဌာနတေိုငျးရငျးသား” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အရငျကထကျ တှငျတှငျကယျြကယျြသုံးလာကွပါတယျ။ ဒီအတှကျလဲ ကမ်ဘာ့ ကုလသမဂ်ဂ ကနေ ဌာနေ တိုငျးရငျးသားဆိုငျရာ ဖိုရမျမြားစှာ ကငျြးပခဲ့ပွီး ၂၀၀၇ခုနှဈမှာတော့ ကုလသမ်ဂ၏ ဌာနေ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားဆိုငျရာ ကွငွောစာတမျး (UNDRIP)ဆိုတာထှကျလာပါတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှမှ ကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျနိငျငံတှမှေလညျး ဌာနတေိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးကို လကျခံခဲ့ကွပွီး အဲဒီအခြိနျတုနျးက လကျမှတျမထိုးတဲ့နိုငျငံဆိုလို့ ဘင်ျဂလားဒကျရျှနဲ့ ဘူတနျ နှဈနိုငျငံပဲရှိခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အာရှစံနဲ့ကိုကျညီတဲ့ တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့ ဌာနတေိုငျးရငျးသား အခှငျ့အရေး ပွဌာနျးကငျြ့သုံးတဲ့နိုငျငံကတော့ နဲပါသေးတယျ။ လကျရှိ စာရေးနတေဲ့ အခြိနျထိတော့ ဂပြနျ၊ နီပေါ၊ ဖိလိပိုငျ၊ ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ထိုငျဝမျတို့သာ တိတိကကြ ဥပဒပွေဌာနျး ပွီး ကာကှယျမှုပေးတာ တှရေ့ပါတယျ။ (ဒီနရောမှာ တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့ဆိုတာ ဌာနတေိုငျးရငျးသားအခှငျ့ အရေးကွငွောစာတမျးပါ အခကျြတှကေို ဥပဒပွေုပွီး အခွခေံဥပဒမှော ထညျ့သှငျးခွငျးကိုဆိုလိုပါတယျ။ “ဌာနတေိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား၏ အခှငျ့အရေးကာကှယျစောငျ့ရှောကျသညျ့ဥပဒေ” ဆိုတာကို ၂၄ဖဖေျောဝါရီ ၂၀၁၅မှာ ပွဌာနျးခဲ့ပမေယျ့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ဌာနတေိုငျးရငျးသားကွငွောစာတမျးကို အပွညျ့အ၀ ထောကျပံ့ထား တဲ့ (ဝါ) အနှဈသာရပွညျ့ဝတဲ့ ဥပဒေမေဟုတျပဲ ၂၀၀၈ အခွခေံဥပဒဟော ဖကျဒရာယျဆနျကွောငျး ကာကှယျ လိုတဲ့ အပျေါယံဥပဒသောဖွဈတယျ။ ဒီဥပဒအကွောငျးပွုပွီး ရေးရာဝနျကွီးဌာနနဲ့ ဝနျကွီးတှရှေိနပေမေယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြခမြှတျရာမှာ ပါဝငျခှငျ့ရှိတဲ့ အခနျးကဏ်ဍမရှိတာ အထငျအရှားပဲဖွဈတယျ။)
မွနျမာပွညျမှာ ဌာနတေိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးနဲ့ပတျသကျပွီး နိုငျငံတကာအဆငျ့ အဦးဆုံး တကျလှမျးခဲ့တာ ကတော့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှဖွေဈတဲ့ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး (KNU), ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး (CNF) နဲ့ နာဂအမြိုးသားမြားလူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှားမှု (NPMHR) စတဲ့ အဖှဲ့တှဖွေဈပွီး ၎င်းငျးတို့ဖွဈတညျမှုကို သတိပွု မိစရေနျ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ဌာနတေိုငျးရငျးသားဆိုငျရာ အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဖိုရမျကို ကိုယျစားလှယျ မြားစလှေတျခဲ့ကွတာဖွဈတယျ။ အဓိက အခွခေံတဲ့ အိုငျဒီယာကတော့ ၁၉၄၇ခုနှဈက တောငျတနျးနဲ့ပွညျမ အကွားခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ ပငျလုံစာခြုပျကို အလေးအနကျထား ဆှေးနှေးခဲ့ကွခွငျးဖွဈတယျ။
တဖကျကနေ မွနျမာပွညျကတိုငျးရငျးသားတှေ ကနဘောလို့ ဌာနတေိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးကို တစိုကျ မတျမတျ ပွောဆိုကွရသလဲဆိုတာနဲ့ ပငျလုံစာခြုပျကို အလေးအနကျစှဲကိုငျကွတာလဲ ဆိုတဲ့ အခငျး အကငျြးကို နားလညျဖို့ သမိုငျးကိုတခကျြ ပွနျကွညျ့ကွရရငျ ဗွိတိသြှတှအေုပျခြုပျတဲ့ (၁၈၂၅-၁၉၄၈) ကွားကာလတှမှော ဗွိတိသြှတှဟော ကိုလိုနီခတျေမှာ လူဦးရမြေားပွီး အဓိကကတြဲ့ ပွညျမကို ကွပျကွပျ မတျမတျ အုပျခြုပျခဲ့ပမေယျ့ လူဦးရနေဲတဲ့ တောငျတနျးဒသေ တှကေိုတော့ သူ့ရှိရငျးစှဲ အုပျခြုပျရေး နဲ့ပဲအုပျခြုပျစေ ခဲ့တယျ။ ကိုလိုနီခတျေအတှငျးမှာလဲ တိုငျးရငျးသားတှဟော အုပျခြုပျရေးအတှငျးမှာ ဝငျရောကျ အမှုထမျးမှုမြားစှာ ရှိခဲ့တယျ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအဦးပိုငျးကာလတှမှောလဲ ကခငျြ၊ ခငျြး၊ ကရငျ စတဲ့ သူတှဟော ဗွိတိသြှတပျမတျောမှာ အမြားဆုံး တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှေ ဖွဈတာတှေ့ ရတယျ။ ပွညျမက ဗမာတှကေတြော့ ၎င်းငျးတိုကို အုပျခြုပျသူ ဗွိတိသြှတှကေိုတှနျးလှနျဖို့ သဘာဝကစြှာ ဂပြနျတှနေဲ့ပူးပေါငျးခဲ့ကွတယျ။ ကမ်ဘာစဈအတှငျး မဟာမိတျ အဖှဲ့ဝငျဗွိတိသြှနဲ့ ဝနျရိုးစှနျးဂပြနျနိုငျငံတို့တှေ တိုကျခိုကျကွတဲ့အခါ ဒသေတှငျးက တိုငျးရငျးသားတှဟောလဲ ၎င်းငျးတို့ ပါဝငျရာဖကျကနေ တိုကျခိုကျခဲ့ကွပွီး စဈကွီးပွီးတဲ့အခါ မယုံကွညျမှုတှနေဲ့ သံသယတှဟော ကနျြနရေဈခဲ့ပါတော့တယျ။
ကမ်ဘာစဈအလှနျမှာ တိုငျးရငျးသားအုပျစုတှအေတှကျ သီးခွား လှတျလပျရေးပေးဖို့ စဉျးစားမှုတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ ၁၉၄၇ခုနှဈမှာ ပွညျမရဲ့ စညျးရုံးမှုကွောငျ့ ရှမျးပွညျနယျ ပငျလုံမွို့မှာ ကခငျြ၊ ခငျြး၊ ရှမျး၊ကယားနဲ့ ပွညျမတို့ပါဝငျတဲ့ ပငျလုံကှနျဖရငျ့ဖွဈလာတယျ။ ဒီကှနျဖရငျ့ကနေ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအမှူးပွုတဲ့ ပွညျမခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ တနျးတူရေးနဲ့ ဖကျဒရာယျအခွခေံမူတှကွေောငျ့ တကျရောကျလာတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှကေနေ တိုငျးပွညျတခု အတူတညျထောငျဖို့ သဘောတူခဲ့ကွတာဖွဈတယျ။ ဒီသဘော တူညီမှုတှေ အပျေါမှာအခွခေံပွီး လှတျလပျရေး ရပွီးရငျ တိုငျးပွညျကို ဘယျလိုအုပျခြုပျမယျဆိုပွီးလဲ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ကိုရေးဆှဲထားရှိထားကွတယျ။ ၁၉၄၈ ဇနျနဝါရီ ၄မှာ လှတျလပျရေး အတူရယူခဲ့ပမေယျ့ ပွညျမဖကျက ခေါငျးဆောငျနဲ့ ပငျလုံစာခြုပျကို ပွညျမသားတှကေိုယျစား အာမခံပေးတဲ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရဲ့ လှတျလပျရေးမရမှီ ခွောကျလခနျ့အလိုက လုပျကွံခံရမှုဟာ ရှိရငျးစှဲ ထိရှလှယျတဲ့ အခွအေနကေို ပိုဆိုးစခေဲ့တယျ။ ၁၉၄၇ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ အကွောငျးပွုရေးဆှဲထားတဲ့ ကရငျပွညျနယျ နမိတျကိစ်စ မကလြေညျမှုကို အကွောငျးပွုလို့ ကရငျခေါငျးဆောငျတှကေနေ သီးခွားလှတျလပျရေး ရယူလိုခဲ့သလို ရှိရငျးစှဲ မှနျနဲ့ ရခိုငျတို့ရဲ့ ပွညျနယျသတျမှတျပေးရေး ဆန်ဒကနေ လကျနကျကိုငျလှုပျရှားမှုတှေ ဖွဈပျေါလာ ခဲ့တယျ။ နောကျဆုံး ၁၉၆၀ခုနှဈမှာ ဝနျကွီးခြုပျဦးနုရဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ကတိကဝတျ ဖွဈတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာကို နိုငျငံတျောဘာသာပွဌာနျးရေးကို တကယျ အကောငျအထညျဖျောလာတဲ့ အခါမှတော့ တနျးတူရေးကို အခွခေံဖို့ ကတိကဝတျနဲ့ ပွညျထောငျစုကို တညျဆောကျလာခဲ့ကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှဖေကျ ကနေ ဘာမှသီးခံနိုငျစရာမရှိတော့တဲ့နောကျဆုံး ပွညျထောငျစုမှခှဲထှကျဖို့ပဲ ရှိလာတော့တဲ့အတှကျ ဦးနုမှ ဦးနဝေငျးကို တဖကျလှညျ့နဲ့ နိုငျငံတျောအာဏာ သိမျးခိုငျးလိုကျပါတော့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၆၂ မတျလ ၂ရကျနမှေ့ာ ဗိုလျခြုပျကွီးနဝေငျးမှ အာဏာသိမျးခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ တိုငျးရငျးသားမြားဆန်ဒဟာ မီးခဲ ပွာဖုံးဖွဈခဲ့ရတယျ။ (ဒီသမိုငျးဆိုငျရာ အခကျြအလကျ တှဟော ဆောငျးပါးရဲ့ ဆိုလိုရငျးကို ထောကျပံ့မညျ့ အကွောငျးမြားကိုသာ ရေးသားထားခွငျးဖွဈတဲ့ အပွငျ အတိုခြုပျထားရတဲ့အတှကျ မပွညျ့စုံမှုမြားရှိပါလိမျ့မယျ။ စာရေးသူ)
တိုငျးပွညျဟာ တပါတီအာဏာရှငျစနဈ၊ စဈအာဏာရှငျစနဈ စတာတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့အပွီးမှာ အငွငျးပှားမှု တှနေဲ့ပဲ ၂၀၀၈အခွခေံဥပဒကေို အတညျပွုခဲ့ပွီး ၂၀၁၀မှာတော့ ဒီမိုကရစေီခတျေဦးကို စတငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီအပွောငျးအလဲဟာ ဝိဝါဒကှဲမှုတှရှေိနခေဲ့ပမေယျ့ အီပွီး မွောငျးပုပျတောငျဖွဈနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရေးရစေီးကို တဖနျပွနျလညျ စီးဆငျး စနေိုငျခဲ့တာကတော့အမှနျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒီရစေီးနဲ့အတူ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဖိနှိပျမှုတှေ အောကျမှာ ရောကျနတေဲ့ ပွညျမနဲ့ တောငျတနျးက လူထုတှကွေားမှာ ကိုယျယုံကွညျရာ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဖကျဒရာယျအိမျမကျ ပွနျလညျနိုးထလာ ခဲ့တာလဲ အဆနျးတော့မဟုတျပါဘူး။
၂၀၁၀ရှေးကောကျပှဲနိငျ ပွညျခိုငျဖွိုးအစိုးရကနေ မွနျမာပွညျကို ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးတညျ ဆောကျဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့သလို၊ ၂၀၁၅ အနိုငျရ အဲနျအယျဒီအစိုးရ ကနလေဲ ၂၁ရာစုပငျလုံအမညျနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ အမြိုးသားရငျကွားစရေေးကို လုပျဆောငျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁၀နှဈတာ ကာလမှာ ဒီအစိုးရနှဈရပျလုံးက တိုငျးရငျးသားမြား (တိုငျးပွညျထောငျဖကျမြား) လိုလားတဲ့ တနျးတူရေးနဲ့ အာဏာခှဲဝရေေးကို ကနြေပျရ လောကျအောငျ လုပျဆျောနိုငျခွငျးမရှိခဲ့သေးတာတော့ သုံးသပျတှရှေိ့ရပါတယျ။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအကပျြ အတညျးနဲ့ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခတှကွေားမှာ လူထု၊ အဓိက အားဖွငျ့ တောငျတနျးသားတှေ အမွငျမှာ သူတို့ရဲ့ ရှိရငျးစှဲအတိတျက လှတျလပျမှုထကျတောငျ တဆငျ့နိမျ့သေးတဲ့ ဖကျဒရာယျစနဈတောငျးဆိုမှုနဲ့ တိုငျးပွညျကို အတူတကှအုပျခြုပျကွမယျဆိုတဲ့ ပငျလုံကတိကဝတျကို ယုံကွညျဆုပျကိုငျလာခဲ့ကွတဲ့သူတှအေနနေဲ့က ဒီအခွအေနဟော မှနျကနျတဲ့ရပျတညျခကျြဟုတျပါရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခှနျးတှမေေးလာကွတယျဆိုတာ လကျရှိ ဒီစာရေးနတေဲ့ ဂြှနျ ၂၀၂၀ အခြိနျမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ မွနျမာပွညျတှငျ စဈပှဲတှကေို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။ တဖကျကလဲ နိငျငံရေးအကပျြအတညျး (Political deadlock) ကိုကှငျးရှောငျပွီး လုပျဆောငျနိငျ တဲ့ လုပျငနျးတှရှေိနရေကျနဲ့ မလုပျဆောငျတဲ့ (နိုငျသေးတဲ့) အနိုငျရပါတီတှရေဲ့ သဘောထားဟာ ဒီ ဖကျဒရာယျလှနျဝါဒ နိုငျငံရေးအယူအဆကို မီထိုးနသေလိုဖွဈနတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒီလို ဖကျဒရာယျလှနျ အိမျမကျ တိုငျးရငျးသာဘယျလောကျကမြား မကျနကွေမလဲဆိုတာနဲ့ နောငျမှာ ဒီလို မဖွဈရလအေောငျ နိုငျငံရး အကပျြအတညျးကို ဘယျလိုဖွလြှေော့မလဲဆိုတဲ့ နိငျငံရေးဆိုငျရာ မူဝါဒမြား ခမြှတျ အကောငျထညျဖျောမှသာ “ဖကျဒရာယျဒီမိုကရစေီနိုငျငံ” တညျဆောကျတာ လမျးမလှဲမှာဖွဈတယျလို့ သုံးသပျ မိတယျ။
နောကျပွီး လကျရှိဆောငျးပါးရေးနတေဲ့အခြိနျမှာ အမရေိကနျနိုငျငံက လူမညျးအမြိုးသား ဂြော့ဖလှိုကျကို ရဲတှဖေမျးဆီးရငျး သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ဖွဈရပျကို အကွောငျးပွုပွီး စတငျခဲ့တဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှဟော အမရေိကနျနိုငျငံတဝှမျးလုံးအပွငျ အာရှ၊ ဥရောပနဲ့ သွစတွေးလနြိုငျငံတှအေထိပါ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပါ တယျ။ ဒီဆန်ဒပွပှဲတှကေို အမရေိကနျသမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ ကတော့ လိုအပျရငျ စဈအငျအားသုံး နှိမျနငျးမယျ လို့ ခွိမျးခွောကျခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကမ်ဘာမှာ ဓနအငျအားနဲ့ စဈအငျအား နံပတျတဈနရောမှာ ရှိနတေဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ သွဇာအရှိဆုံးဖွဈတဲ့ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ အနနေဲ့ လကျရှိ ဖွဈပှားနတေဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှကေို စဈတပျသုံးပွီး ဖွိုခှငျးခငျြပမေဲ့ တကယျ့ လကျတှမှေ့ာ အကောငျအထညျ မဖျောနိုငျတာဟာ ဖကျဒရယျစနဈနဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒရေဲ့ အားကောငျးခကျြကွောငျ့လို့ ပွောမယျဆိုရငျမမှားဘူးလို့ ထငျပါတယျ။
အထကျမှာ တငျပွခဲ့ပွီးဖွဈတဲ့ ဌာနတေိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးကွငွောစာတမျးမှာ အခကျြ ၄၆ခကျြပါရှိပွီး သခြောဖတျရှုဆငျခွငျမယျဆိုရငျ ဌာနတေိုငျးရငျးသားတှခေညျြးပဲ ဖွဈကွပါတဲ့ပွညျမနဲ့တောငျတနျးသားတှေ အတှကျ အကြိုးရှိမယျ့၊ နိုငျငံရေး အကပျြအတညျးကို ရှောငျကှငျးကာ တိုငျးရငျးသားမြားလိုလားတဲ့ တနျးတူအခှငျ့အရေးနဲ့ နိုငျငံရေး မြှျောမှနျးခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ့အဖွဟော ဒီ ဌာနတေိုငျးရငျးသား ကွငွောစာတမျးပါ အခကျြမြားပဲ ဖွဈတယျလို့ တဲ့တိုးပွောရရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။
တကျခဲ့တဲ့အစိုးရတှကေနေ လုပျဆောငျနတေဲ့ စီမံကိနျးမြားဟာဆိုရငျ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော အမြားစု ဖွဈပါတယျ။ တနညျးပွောရရငျ ကိုယျ့အိမျဝငျးထဲ သူမြားကနေ အကြိုးအမွတျလာယူနတေဲ့၊ ပွညျထောငျစု အတှကျလဲ အကြိုးအမွတျမရတဲ့ အဖွဈတှအေမြားကွီးရှိနေ သလို သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး သမားတှကေနေ ထောကျပွနပေမေယျ့ ဆကျလကျဖျောဆောငျနတေဲ့ စီမံ ကိနျးနဲ့ လုပျဆောငျမှုတှေ မွနျမာပွညျ တဝှမျး ဒငျးကွမျးရှိနတောပါ။
နောကျတဖနျ တိုငျးရငျးသားမြား ရဲ့ ထုံးတမျးဓလနေဲ့ လားလားမြှမကိုကျတဲ့၊ ဘာအတှကျရယျလို့တိတိကကြ မရှိပဲ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုနှငျ့ ခိုငျမာအားကောငျးခွငျးလဲမရှိတဲ့၊ ဥပဒတှေေ ပွငျဆငျဥပဒတှေေ ဖွညျ့စှကျပွဌာနျး ပမေယျ့ တတိုငျးပွညျလုံးက လကျမခံတဲ့ မွယောဥပဒတှေေ ပွဌာနျးခဲ့ခွငျးစတာတှကေလဲ ဖကျဒရာယျစနဈ ဖျောဆောငျဖို့ သှားနပေါတယျဆိုတဲ့ မွနျမာပွညျရဲ့ ဒီမိုကရစေီ လမျးပွမွပေုံဟာ မှနျနရေဲ့လားလို့ မေးခှနျးထုတျ စရာပဲ ဖွဈပါတယျ။ (ယခုဖျောပွပါအခကျြမြားအတှကျ ကုလသမဂ်ဂ၏ ဌာနတေိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားဆိုငျရာ အခှငျးအရေးကွငွောစာတမျးပါ အပိုဒျ ၂၅မှ၃၂ကိုကွညျ့ရှု ခငျြ့ခြိနျရနျ)။
အထှထှေနေိငျငံရေးအကပျြအတညျးတှရှေိနှငျ့ပွီးသား မွနျမာနိုငျငံဟာ ၂၀၂၀မှာ တတိယအကွိမျမွောကျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပပါတော့မယျ။ တခြိနျတညျးမှာလဲ ဒီကာလဟာ တကမ်ဘာလုံးကနေ စိုးရိမျထိတျလနျ့နရေတဲ့ ကိုဗဈ ရောဂါကပျဘေးဖွဈနတေဲ့ အခြိနျနဲ့တိုကျဆိုငျနပေါတယျ။ ဒီကပျဘေးဂယကျကလဲ စီးပှားရေး အကပျြအတညျးနဲ့ စီးပှားရေး နာလံထူရေးဆိုငျရာ စိနျချေါခကျြတှေ ဖွဈလာစမှောဖွဈတဲ့အတှကျ နောကျတကျ မယျ့အစိုးရကနေ မူဝါဒပိုငျးဆိုငျရာ ပွငျဆငျထားမှု မြားစှာလုပျရမှာပဲဖွဈတယျ။
နောကျတဖနျ တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော ဖျောဆောငျနဆေဲ စီမံကိနျးတှနေဲ့ မကိုကျညီတဲ့ ဥပဒတှေကေို ဘယျလိုပွငျဆငျရေးဆှဲမလဲ၊ ၂၀၀၈ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒရေဲ့ ဖွရှေငျးမရနိငျတဲ့ ပုဒျမတှကေို ဦးတညျခကျြထား နမေယျ့အစား တခွားအလုပျဖွဈနိုငျတဲ့၊ တိုငျးရငျးသားမြားလိုလားတဲ့ အခကျြတှကေို ဘယျလိုခဉျြးကပျ မလဲဆိုတာမြိုးကို စဉျးစားမှသာလြှငျ အကပျြအတညျးနဲ့ စိနျချေါခကျြတှကေို စီမံခနျ့ခှဲနိငျမှာဖွဈတယျ။
အခြုပျဆိုရရငျ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ဌာနေ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားဆိုငျရာ ကွငွောစာတမျးကို ပါဝငျထောကျခံ လကျမှတျထိုးပွီးသား မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ၎င်းငျးကွငွောစာတမျးပါ အခှငျ့အရေးတှကေို လေးစားလိုကျနာပွီး ပျေါလစီခမြှတျရာမှာ ၎င်းငျးကွငွောစာတမျးပါအခကျြတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျးအားဖွငျ့ နိုငျငံရေးအကပျြ အတညျးဖွရှေငျးခွငျးနဲ့ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရာမှာ ပိုမိုထိရောကျမှာဖွဈတယျလို့မွငျမိတယျ။ လာလတ်တံ့ သောကလာတှမှောလဲ တိုငျးရငျးသားမြား ယုံကွညျနဆေဲဖွဈတဲ့ ဖကျဒရာယျအိမျမကျကို ဆကျလဲကိုငျဆှဲဖို့နဲ့ ဖကျဒရာယျလှနျအိမျမကျတှနေဲ့ ပိုမိုကွမျးတမျးတဲ့ အထှထှေအေကပျြအတညျးထဲ မသကျဆငျးလိုဘူး ဆိုခဲ့ရငျ အထကျဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြတှကေို မူဝါဒဖျောဆောငျသူတှအေနနေဲ့ အလေးအနကျထား စဉျးစားကွစလေိုကွောငျးဖျောပွအပျပါတယျ။
၂၂ ဂြှနျ ၂၀၂၀